Xeer ku saabsan askari lagu dilay gudaha Soomaaliya oo la meelmariyey
Xeer ku saabsan askari lagu dilay gudaha Soomaaliya oo la ansixiyey
Weerar gaadmo ah oo Al-Shabaab ay fulisay ayaa lagu khaarijiyey laba sano kahor.
WASHINGTON, US – Baarlamaanka Mareykanka ayaa qarka u saaran in uu meelmariyo hindise sharciyeed xarun caafimaad loogu magac-darayo askari Ameerikaan ah oo laba sano kahor lagu dilay gudaha Soomaaliya.
Aqalka Wakiilada ayaa xeerkaan ansixiyey Arbacadii, waxaana qorshuhu yahay in loo gudbiyo Senate-ka si waajibaadkooda uga gutaan.
Alexander Conrad oo kasoo jeeda magaaladda Chandler ee gobolka Arizona waxaa loogu magac-darayaa xarun lagu daaweeyo askarta halyeeyada ah ee Mareykanka uga soo dhawacma argagixiso la dirirka.
Sharci-dejiye Andy Biggs oo ka tirsan Jamhuuriga isla markaana ku jira mudaneyaasha gedaal ka riixaya xeerkaan ayaa caddeeyay in ay todobaadka soo aadan uu Aqalka Sare cod u qaadi doono hindisa sharciyeedka.
Sidda ay warisay saxaafadda maxaliga ah, mudaneyaasha u ololeynaya xeerkaan ayaa gaaraya sideed, waxaana ay kasoo jeedaan gobolka Arizona.
Conrad ayaa bishii June 8-deeda sanadkii 2018-kii waxaa lagu dilay Soomaaliya kadib markii ay weerar gaadmo ah ku ekeysay Al-Shabaab.
Ciidamadda Mareykanka ee jooga Soomaaliya ayaa tiradooda waxaa lagu sheegaa in ay gaarayaan ku dhowaad 500 isla markaana ay isugu jiraan tababareyaal, sirdoon iyo askar fulisa howlgaladda ka dhanka ah argagixisadda.
Mareykanka oo xiray Soomaali "rabay in uu isku qarxiyo Aqalka Cad"
Wararka 30.07.2019. 09:21
21-sano jirkan oo ku biiri rabay Daacish ayaa sidoo kale wuxuu "muujiyey xiisaha uu u qabo in uu dad gowraco"
FBI oo baareysa warbixino laga faafiyey Xildhibaan Ilhaan Cumar
Caalamka 03.02.2020. 10:26
Mareykanka oo weeraray saldhigyo ay Al-Shabaab leedahay
Soomaliya 30.01.2020. 10:10
Sooyaalka ku xigeenka cusub ee ergayga UN-ka ee Soomaaliya
Soomaliya 28.08.2019. 23:00